Abazali bafuna kushaywe umhlahlo esikoleni - Ilanga News
Home Izindaba Abazali bafuna kushaywe umhlahlo esikoleni
Basola othisha ngokufa kwezingane ezine
ABAZALI bathi wumhlahlo kuphela ozoba yisixazululo esikoleni njengoba besola ukuthi kunothisha ophatha umuthi omubi.
BAGASELE esikoleni bethukuthele begane unwabu abazali bezingane ezifunda eLangeni Combined School, eKhambi, eVryheid, ngeledlule, besola othisha bakulesi sikole ‘ngokuthakatha’, kulandela isigameko sokushona kwabafundi abane belandelana kusukela ngoMbasa (April). Lesi sigameko sesidalele othisha bakulesi sikole amazinyo abushelelezi kubazali benzingane njengoba bethi bafuna kubizwe isangoma esizoshaya umhlahlo ngothisha ‘ophethe ikhubalo elibi’. Kubikwa ukuthi indlela isimo esishube ngayo esikoleni, ngoLwesibili abazali bagasele kusona befuna othisha bachaze mayelana nezigameko ezenzekayo (esikoleni) zokushona kwezingane, abathi zibenza basole othisha ngokuthakatha.
ILANGA lihabule ngomthombo walo ukuthi indaba isuke ngesikhathi kuqala ukushona kwezingane zamantombazane ezine ngendlela engaqondakali zilandelana. Leli phephandaba lithole ukuthi kusukela ngoMbasa (April) sekushone izingane ezine, kanti kukhona neshonele emagcekeni esikole, okwenza abazali basole ‘ukuthakatha kothisha’ ngaphakathi. Kubikwa ukuthi emuva kokuba abazali begasele esikoleni ngoLwesibili olwedlule, ngoLwesine kubizwe umhlangano womphakathi obuhlanganisa nobuholi bendabuko nomnyango kuzodingidwa lolu daba. Kuthiwa abazali bafuna kubizwe izangoma zizobhula esikoleni ukuze kutholakale ukuthi ngubani ‘osebenzisa umuthi kothisha’. “Lesi sikole kasinaye uthishanhloko, washona, okhona ngosabambile.
“Zonke izingane ezishonayo ngezamantombazane. Izingane zigula isikhashana bese ziyashona. “Enye ike yafika yaxineka esikoleni yakhishelwa ngaphandle emthunzini yabe isiyashona. Lokhu kudale ukuthi abazali babe nezinsolo ukuthi kunothisha osebenzisa umuthi ongemuhle esikoleni,” kusho ilungu lomphakathi. UMnu Eliaus Ndlela, oyikhansela kule ndawo, uvumile ukuthi udaba olunjena lufikile kuyena, abazali bekhala ngothisha bakulesi sikole, bebasola ngokusebenzisa umuthi omubi, abasola ukuthi yiwona owenza izingane zishone ngale ndlela. “Yize bengingekho emhlanganweni, kodwa sekufikile kimina ukuthi abazali bafuna kufike izangoma esikoleni, okuyinto uMnyango wezeMfundo oyenqabile.
“Ngigcine kuzoba nomhlangano wezinduna,” kusho uMnu Ndlela. Ithintwa iNkosi Langalakhe Zulu, lesi sikole esisesizweni sayo, ithe ngeke ikwazi ukuphawula ngalolu daba. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthe umnyango ubungakezwa ngalolu daba. Ube esexwayisa umphakathi ukuthi uma unezikhalo, kumele ulandele imigudu efanele, kungaphazanyiswa ukufunda nokufundisa esikoleni. Mayelana nodaba lwezinsolo ‘zokuthakatha’, uthe umnyango ngeke uze uyikhulume leyo, kodwa abazali noma umphakathi uma uvumelana ngokuletha umuntu ozokhuleka esikoleni, ungakwenza lokho.
Previous articleBavulelane amacala undunankulu noNgizwe
Next articleBakhiphe amangwevu kwiNgoma kaZwelonke